China Jet Mill WP System – Tinye na ụlọ ọrụ Agrochemical na ndị nrụpụta | Qiangdi
Igwe ihe nkpuchi Jet a na-emegharị emegharị bụ n'ezie ngwaọrụ dị otú ahụ nke na-etinye ihe na igwe nri site na ntinye nri, ihe ntụ ntụ na-abanye na mpaghara nkewa, ha na-emetụta ibe ha n'ime ime ụlọ ahụ site na ike nke centrifugal site na nnukwu ọsọ n'usoro classifier wheel na nke centripetal nke gbara onye ofufe, ndị ruru eru ntụ ntụ na-anakọtara site na mmiri na akpa nyo, na oversized ntụ ntụ na-aga n'ihu na-egweri.
Nke mbu, nri ihe oriri sitere na nri - ihe ndi a gbanwere na nke mbu 3 m3igwekota maka premixing, na ájá mkpoko ga-anakọta ájá n'oge nri usoro, mgbe ahụ, nke abụọ 3m3igwekota ụlọ ahịa gwakọtara ihe, mgbe ahụ banye ugboelu igwe nri maka egwe ọka, mmepụta urughuru size nwere ike gbanwee site ukpụhọde dị iche iche n'usoro n'usoro ọsọ nke classifier wheel ,. Mgbe igwe na-egwe ọka, ihe ga-agafere ajọ ifufe ahụ site na ike nke onye na-edepụta ihe na onye na-ekpo ọkụ ájá n'elu nke mbụ 4m3 igwekota, nyefee na nke abụọ 4m3 igwekota maka agwakọta tupu ngwugwu ma ọ bụ nyefee usoro WDG.
Jet Mill System - Tinye na atụmatụ agrochemical
Usoro WP bụ ngwakọta zuru oke nke teknụzụ jet, jikọtara teknụzụ na teknụzụ njikwa ọgụgụ isi. nke bụ ihe na-enye afọ ojuju maka ọgwụ na-egbu ihe na-agwakọta ọtụtụ ma remix
Anyị nwere ihe karịrị 10 ndị ọkachamara na teknụzụ ndị tinyeworo aka na nhazi usoro maka ihe karịrị afọ 20 na ụlọ ọrụ ntụ ma nwee ahụmịhe bara ụba na ịmegharị, ịgwakọta, ihicha, pelletizing, nkwakọ ngwaahịa, na ntụ ntụ. na Agrochemical WP / WDG production lines, Anyị nwere ike ịmepụta usoro ihe eji eme ihe dịka ihe ndị ahịa chọrọ si eme iji chọọ ihe ndị ahịa chọrọ maka ihe dị iche iche.
Efere eserese nke Fluidized-bed Jet Mill WP Line
Uru maka usoro dị iche iche
A. na-aga n'ihu nlereanya，Etinyere aka na mmepụta ihe (QDF-400 akwadoro ngwaahịa maka ụlọ ọrụ agrochemical)
1 .Pipeline njikọ n'etiti ájá mkpoko na okokụre ngwaahịa tinyekwa gbochie ájá leaking si, na-aghọta dịghị ájá nkwakọ na ọ dịghị ofufe.
2. Ejima ịghasa igwekota nwere ogologo stirrer na ịghasa imewe ， nke na-kpamkpam inggwakọta ihe onwunwe si edozi n'okpuru ihe nke mgbanwe na adiana.
B. Na-aga n'ihu ihe nlereanya, Etinyere otutu mmepụta (QDF-400 kwụ gburugburu rịbọn igwekota imewe)
1 .Raw ihe hopper nwere agwakọta mkpanaka imewe, na ịghasa bụ ezuru ogologo ruo na ala na-ihe onwunwe eruba were were.
2.Horizontal gburugburu rịbọn igwekota uru: Ọ bụ ihe adaba ime ka ụfọdụ ngwaahịa nke kwesịrị ka ịgbakwunye adjuvant ma ọ bụ ndị ọzọ ọgwụ ke okokụre ngwaahịa. Na inggwakọta ka mma ma zie ezi karịa ejima ịghasa igwekota. ala dị elu karịa Ejima ịghasa igwekota, mfe iji wụnye.
C. inudị na-aga n'ihu ， Etinyere aka na mmepụta ihe (QDF-600 Twin screw mixer design)
Ma ndị mbụ na ndị ikpeazụ inggwakọta usoro na-itinye mmadụ abụọ ịghasa agitators nke hụ na inggwakọta bụ zuru ezu na symmetrical. Ihe eji eme conical na-eme ka ihe na-agbada ala.
D. Simplified nlereanya, Applied na ogbe mmepụta (QDF-400 Upper nri mode)
Advantage: Onye na-ekewa mmiri ozuzo na igwe mkpoko: Tinye mita vibration na akụkụ cone iji zere nchịkọta ihe.
E.Simplified nlereanya, Applied na ogbe mmepụta (QDF-400 Bottom nri mode)
Advantage: Onye na-ekewa ikuku: Tinye otu onye na-ahụ maka ikuku mmiri ọzọ mgbe onye na-azụ nri ga-achụsakwa akụrụngwa na-asọpụta ma zere nchịkọta ihe.
Pakistan Agriculture factory, Pesticides na Herbicides ntụ ntụ egweri, Otu set nke QDF-400 WP na-aga n'ihu mmepụta edoghi, Production ikike 400kg / h, urughuru size D90: 45μm
Burma Agriculture factory, Pesticides na Herbicides ntụ ntụ egweri, Otu set nke QDF-400 WP simplified mmepụta ahịrị, Production ikike 400kg / h, Ngwakọta oke D90: 30μm
Egypt Agriculture factory, Pesticides na Herbicides ntụ ntụ egweri, Otu set nke QDF-400 WP na-aga n'ihu mmepụta edoghi, Production ikike 400kg / h, urughuru size D90: 20μm
Azịza: Anyị na-eziga ndị injinia na saịtị ndị ọrụ nke ndị ahịa ma na-enye ntuziaka ọrụ ntanetị na nlekọta n'oge ntinye igwe, inye ọrụ na nnwale. Anyị na-enye akwụkwọ ikike nke ọnwa 12 mgbe echichi ma ọ bụ ọnwa 18 mgbe nnyefe ahụ.
Azịza: Anyị ga-enye nkọwa ọ bụla akọwapụtara nke ọma teknụzụ iji kụziere ha maka ịrụ ọrụ na ndozi. Na mgbakwunye, ndị injinia anyị maka nzukọ ndu ga-akuziri ndị ọrụ gị na saịtị.
Nke gara aga: GMP FDA Fluidized-bed Jet Mill
Osote: QDF-400 WP n'ihu Production System Of Jet Mill N'ihi 400kg